LISTE ADDITIVE DES SOCIÉTÉS AGRÉE POUR LA COMPAGNE VANILLE 2019 – 2020
Notontosaina ny 20 Jona lasa teo, tetsy amin’ny Carlton Anosy ny famaranana amin’ny fomba Ofisialy ny tetik’asa TSARA izay niarahanan’ny governemanta malagasy tamin’ny ONUDI na Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel sy ny fanjakana norveziana. Ny tanjon’ity tetik’asa ity dia ny hampiroboroboana ny asa tanana eto Madagasikara mba hanatsarana ny fari-piainan’ireo vehivavy marefo any amin’ny faritra Antsinanana.
Voalaza nandritra ireo fandraisam-pitenena fa voalohany teto Madagasikara no nampiasaina ny antsoina hoe : « Industrie créative » (azo adika hoe indostrian’ny famoronana) iadiana amin’ny fahantrana. Ny vehivavy sy ny tanora no tsinjovina manokana amin’izany. Voalohany ihany koa ny fametrahana ny sehatra « MASTER EN DESIGN & INNOVATION » eto Madagasikara, hanofanana tanora misehatra amin’izany sy mba tsy hiankinana amin’ny fanafarana olona manam-pahalalana momba izany. Ary farany ny fametrahana ny programam-pianarana mahakasika ny fandraharahana eny amin’ireo lisea tekinika (10 no efa nisitraka izany) ka hivelaran’izany manerana ny nosy.
Maro ireo orinasa kely sy salan-tsalany ary ireo mpandraharaha mpanao asa tanana nahita tombony tao anatin’izany ary nijoro vavolom-belona vokatry ny fisian’ity tetik’asa ity. Ny taona 2015 no nanombohan’ny tetikasa ka izao mifarana izao. Nampivondrona mpikambana miisa 446 ka 355 dia vehivavy avokoa. Efa manana lalam-barotra koa izy, ka afaka manondrana any ivelany na ato anatiny ka 1000 mahery ny vokatra efa lafon’izy ireo. Marihina fa ny entana vokarin’ny TSARA dia mitondra ny anarany ihany. Ary ny akora ampiasainy dia mampifandray ny « fibre » voajanahary, ny vy ary ny plasitika izay entina hamoronana entana sy fitaovana mihaja, kanto, ary miavaka sy manitona. Izy koa dia efa nahazo « mention d’honneur de la plus haute distinction internationale de design ». Izao no tanteraka dia vokatry ny fiaraha miasa sy fampitam-pahalalana avy amin’Andriamatoa Giulio Vinaccia, designer italiana malaza.
Farany dia nomarihina tamin’ny alalan’ny famindrana taratasim-pahefana isan-tsokajiny amin’ireo sampana tandrifin’izany ity lanonana ity, toy ny :
• mari-pahaizana sy toro-dalana mpanofanana, izay nataon’ny ONUDI sy ny Ministeran’ny fanambeazam-pirenena
• taratasim-pandefasana miendrika ho fanomezana ireo fitaovam-panofanana ho an’ireo « designer », izay nataon’ny Minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika sy ny Tale Jeneralin’ny ISCAM
• famindrana andraikitra momban’ny fampitaovana informatika
• famindrana andraikitra mifandraika mari-pahaizana « Master Design et Innovation », nataon’ny ONUDI ho an’ny Minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika
– famindrana andraikitra momban’ny fananana, ny marika, ny endrika fahafaharana sy ny fitaovana rehetra, izay nataon’ny DGA ho an’ny fikambanana Harenatsara
• famindrana andraikitra mikasika ny famaranan’ny tetik’asa, nataon’ny tompon’andraikitra ny ONUDI sy ny DGA.
Nohon’izany, ny MICA dia manohy ny fanaraha-maso ny fitohizan’ny tetik’asa TSARA ary mamporisika amin’ny hivelarany. Ho an’ny DGA dia lalana iray hivelaran’ny tetikasa ny programa nasionaly FIHARIANA ka mitohy hatrany ny fampaherezana ny mpandraharaha handray anjara amin’izany.
Fanohanana ara-teknika avy amin’ny tetikasa SADC-TRF.